Mini French Bulldog: 10 Yakanaka Chokwadi Iwe Wausina Kuziva - Inobereka
Mini French Bulldog: 10 Yakanaka Chokwadi Iwe Wausina Kuziva
Iyo French Bulldog irudzi runonakidza, asi ko zvakadii kana izvi zvese zvakamisikidzwa pasi kuita imbwa diki?
Iyo diki French Bulldog inotipa ine inorema boned rudzi mune imwe yakatetepa muviri apo uchitakura zvese zvinodikanwa uye zvinoyevedza hunhu hweyakajairika saizi French Bulldog.
Yakanyanya kudanana uye yakapusa kuenda, iyo diki French Bulldog inoita kuwedzera kukuru kune chero mhuri.
Iyi mbwanana inochinjika zvakanyanya, zvichireva kuti chero munhu anogona kuve nerudzi urwu, sezvo ivo vachikodzera kune ese akasiyana marudzi edzimba!
Neraki zvido zvavo zvekurovedza muviri zvakaganhurirwa, kunyanya nekuda kwehukuru hwavo hushoma, asi chii chimwe chiripo chekuziva nezve rudzi urwu?
Ngatigovanei nemi zvinhu gumi imbwa yega yega inoda kuziva nezve ino inonakidza uye diki saizi ...
10. Lady Gaga Anotora Mini Mini Bulldog
9. Vanofanira Kuva Vadiki Kupfuura 13 Inches Mukukwirira
8. Mini Mini Bulldog Inotambura Nekupisa Kuneta
7. Iyi Rudzi Rwakanaka Mhuri Pet
6. Iyo Mini French Bulldog Ine Matambudziko Ekufema
5. Aya maPooches Vagere Muguta!
4. Mini French Bulldog Inodhura Kubva $ 2,000 Kusvika $ 8,000 USD
3. Vanoomesa musoro
2. Ivo Vanoda Kushambidzika Kudiki uye Exercise
1. Iyo Mini French Bulldog Haizivikanwe Pamutemo Neiyo AKC
Kuzivikanwa kwerudzi urwu inosimbiswa nekuzivikanwa kwavo pakati peA-runyorwa vakakurumbira.
Varidzi vanozivikanwa veiyi imbwa vanosanganisira: Lady Gaga, Dwayne 'The Rock' Johnson, Leonardo DiCaprio uye nehunyanzvi Chrissy Teigen!
Kunyangwe Martha Stewart ane rudo neake French Bulldogs.
Nemamiriro avo ekurumbira, hazvishamise kuti kudiwa kweMini French Bulldog yabvisa!
Kuziva mini French Bulldog iri nyore, ingo tsvaga iyo diki vhezheni ye iyo yatove inoyevedza French Bulldog .
Sechikamu che mhuri yeBulldog , iyo mini Frenchie ine chitarisiko chakasiyana neyakaumbana uye yemhasuru inovaka ichiri yakasimba kwazvo.
Sezvo mini French Bulldog isiri yerudzi rwepamutemo hapana mimwe yakatarwa sosi mirau .
Nekudaro, padiki padiki, ivo vanofanirwa kuve vari vadiki pane avo French Bulldog vanin'ina nekusvika pakakwirira gumi nematanhatu masendimita pakureba uye huremu hwakawanda hwema 28 pondo.
Ivo vane hombe-seye nzeve dzebati, idzo dzakamira uye dzakagara pamusoro pemisoro yavo, uye maziso avo akakomberedza akakomberedza anoita kuti zviome kusarega kuomesa musoro kwavo kuchitora.
Mhedziso yavo pfupi inowedzera pakuonekwa kwavo kwakanaka asi inogona kutakura zvinetswa zvehutano zveayo (ona chokwadi 6 pazasi).
Ruvara rwejasi zverudzi urwu rwakafanana neyavo akajairwa makunakuna, kusanganisira:
Fawn chena gireyi
Nhema Brindle Chena & Tani
Chena & Nhema Grey & Chena
Ose madiki uye akaenzana saizi Frenchies akasarudzika uye anozivikanwa mukutaridzika kwavo zvichiita kuti zvive nyore kwazvo kuziva .
Kusiyana nedzimwe mhando dzembwa, hadzidi kuwanda kwepfungwa kana kuita kwomuviri. Muchokwadi, ivo vari kupfuura vanofara kuve kwako parutivi-kukanda pazuva kune hwaro.
Kana iwe uchitsvaga wekusimba pal kana anomhanya shamwari, saka diki French Bulldog inogona kunge isiri iyo rudzi yako.
Izvi kubereka kunoenderana nekuneta kwekupisa uye kurovedza muviri kwakakonzera kupunzika.
Muchidimbu, izvi zvinogona kunge zvichikonzerwa nemumuromo wavo mupfupi uye kutadza kufema kuyerera.
Chero chingave chikonzero, iyi imbwa inokurumidza kuzvishandisa nesimba panguva yekutamba kana kumhanya kwenguva refu, uye inokodzera kufamba kwemaminetsi makumi maviri kusvika makumi matatu pazuva.
Kana iwe ukaona yako mini Frenchie kufema zvakanyanya, kana kukurumidza, edza kutora zororo kana kudzora zvinhu pasi.
Vane hunhu hune rudo, pamwe nekutamba kwavo, zvinoreva kuti vanogona kuita shamwari huru kumhuri dzine vana.
Rudzi urwu runowanzo fambidzana zvakanaka nedzimwe mhuka dzinovaraidza dzemhuri uye mhuka.
Zvisinei, vane nyama yekutyaira , saka zvinozivikanwa nekudzinganisa katsi kana tsuro. Kusindimara kwavo kunogona kuita kuti tsika iyi ive yakaoma kukaka zvakare!
Kana zvasvika kune dzimwe imbwa, kana ikafambidzana kubva pazera diki, hapana chikonzero chekuti nei Frenchie yako isingakwanise kuve shamwari dzakanaka nedzimwe nhengo dzemhuri dze canine.
Zvemagariro zvinoenda kure kure kune chero imbwa yevakuru. Iwe unofanirwa kuchengeta mbwanana yako zvakanaka kushamwaridzana kuti uve nechokwadi chekuti vanokura vachiita hunhu uye hunhu hwakanaka canine.
Iyo mini French Bulldog ndeye inonakidza-inoda uye inotamba canine yekuwedzera .
Nekuda kwehunhu hwavo hwehukama (uye saizi diki) iyo diki haisi imbwa huru yekurinda. Vanogona kukuyambira nezvevashanyi nevasingazive, asi vanokurumidza kudziya vanhu uye kuhukura kusingaperi hakufanirwe kunge kuri nyaya.
Iyo pfupi muromo we mini French Bulldog inogona kutaridzika, zvisinei, inouya nehutano hutano.
Brachycephalic Mhepo Yechirwere Syndrome inokonzerwa nejaya rakapfupiswa uye mhino yeFrench Bulldog.
Ipo ichi chimiro chemabhonzo kutungamira kune yekufema nzira ipfupikiswa , huwandu hwezvinyoro nyoro hunoramba hwakafanana.
Aya matishu anobva akwirirwa kuita nzvimbo shoma inokonzeresa kuvharika munzira yekufema uye kunetseka kufema.
Idzo nyama imwechete inozokonzeresa kuti iyi mini kuberekesa kuhotsira uye kuridza ngonono. Nekudaro, Brachycephalic Airway Syndrome inogona kuve yakanyanya, ichikonzera kusagadzikana, kushungurudzika uye kunyangwe rufu.
Kugara uchifema kunokanganisa imbwa yako kugara zvakanaka uye kunodzitadzisa maererano nenguva yekutamba uye kurovedza muviri (ona chokwadi 7 pamusoro).
Uku kukanganisa kwakagarwa nhaka uye kunogona kuoneka mune mazhinji e mini French Bulldogs, kunyangwe, kuomarara kwenyaya imwe neimwe kungave kwakasiyana.
Ivo akakodzera kune akawanda akasiyana mamiriro ehupenyu, izvi zvakazara kwauri!
Kukura kwavo kudiki, uye kushomeka kwekuchengetedza zvinodiwa, kunovaita shamwari dzinotakurika uye dzinochinja.
Iyo mini French Bulldog ishamwari inochinjika , asingade yadhi huru yekumashure uye anogona kuchengetwa zviri nyore mumusha mudiki.
Nekuti ivo vanokwanisa kuchinjika kumamiriro ekumaruwa kana kunyangwe mafashoni mafambiro ekugara, ivo vanowanzoonekwa seanogara muguta uye unogona kuona Frenchie ichidzungaira migwagwa yeNew York!
Rudzi urwu ishamwari ine rudo zvakanyanya uye yakavimbika.
Ivo vanonyatsoda kutarisisa, kunyanya varidzi vayo uye mini French Bulldog inogona kunge iri inonakidza. Asi nekuda kweizvi, vane mutengo wakakura mutengo.
Iyi imbwa huru yekunonoka husiku nemoto uye inozivikanwa kutevera muridzi wayo kutenderera imba.
Chero bedzi iwe ukavapa kutarisisa uye rudo ipapo ivo vari anofara uye anonakidza-anoda canines.
Ichi chizvarwa chisingaite mushe choga kwenguva refu yenguva .
Ivo vane rudo rwakanyanya uye izvi zvinoreva kuti nguva yakawandisa kure nevadikani vavo inogona kutungamira kune ane hunhu maitiro sekusagadzikana kana kunyangwe kupatsanurwa kunetseka.
Imbwa yezuva-yekuchengeta zvakare mhinduro hombe kune avo vanoshanda mazuva marefu. Nekudaro, kana basa rako richida kugara uchienda nguva uye kufamba saka izvi zvinogona kunge zvisiri zvakakukodzera iwe.
Ose maFrench Bulldog uye mini French Bulldog vanozivikanwa kuve neyakaoma musoro.
Iyi diki yakasindimara inogona kunge inonakidza, asi zvinogona kureva kuti kuvadzidzisa kungangoda nguva yekuwedzera, kushanda nesimba uye moyo murefu!
Zano redu nderekuti chengeta kudzidzisa kupfupi, kunakidza uye kutapira .
Kunyanya kubhowekana nembwanana yako, ndipo pavanozonyanya kushinga kuteerera!
Namatira chete kune yakanaka yekusimbisa nzira. Rumbidza, mubairo uye kurumbidza zvakare, rega pooch yako izive kuti vari kuita basa rakakura nekufara, kurumbidza uye kuita kwakanaka.
Ivo vanozivikanwa kuve chaicho chikafu chinosimudzira chikafu.
Bhachi ravo rakafanana nerevabereki vavo, French Bulldog. Izvi zvinoreva kuti jasi ravo rakapfupika uye rakatsetseka, zvichiita kuti zvive nyore kwazvo kugadzirisa.
Iyo mini French Bulldog dos inoda kumwe kushambidzika (uye kugeza) kuona kuti jasi ravo uye ganda zvinochengetwa zvine hutano, zvisinei, izvi zviri nyore kwazvo nekuda kwehukuru hwavo hudiki.
Kuchengetwa kwembambo kwakakodzera uye kutarisirwa mazino kwakakoshawo . Edza kujairira mbwanana yako kuti ive nemiromo nezvigunwe zvakabatwa kubva paudiki (izvi zvichaita kuti kuchenesa hwaro kuve nyore kwazvo).
Nekuda kwejasi ravo rimwe chete, diki French Bulldog haisi yekudyara kukuru, zvisinei, ichi hachisi rudzi rwe hypoallergenic ; vanongova nemvere pfupi.
Izvo zvidiki zvavo zvekushambidzika zvinodiwa pamwe chete neyavo mashoma ekurovedza zvinodiwa izvo zvinoita kuti rudzi urwu rukwane kune iye 'akasununguka' muridzi wembwa.
Iyi imbwa haisi yepamutemo imbwa dzinza.
Iyo diki diki yeiyo French Bulldog haina kuzivikanwa zviri pamutemo neAmerican Kennel Club.
Miniaturizing yakakurumbira mhando iri kukurumidza kukura mukuzivikanwa nekuda kwavo kushoma kwekuchengetedza zvinodiwa, inoratidzika chitarisiko uye kutakurika.
Kubereka miniaturized French Bulldogs kunogona kuitika nenzira nhatu dzakasiyana:
Kubereka kweLitter Runts
Iko kubereka kweiyo mini French Bulldog kunogona kuitika nekuberekesa kwe 'marara runts'. Tsvina yega yega ine runt, ichi chiri chidiki chembwanana mumarara.
Kuti ubereke miniaturized Frenchies, dzimwe nguva runt dzinotorwa kubva kumatara uye dzinoberekerwa pamwechete mune tarisiro yekuti saizi yavo diki inotakura kumbwanana dzavo.
Nehurombo, kubereka kubva kumarara marara inogona kuuya nenjodzi dzehutano .
Muchinjikwa Kuzvara neToyi Imbwa
Imwe nzira iyo mini yeFrench Bulldogs inogadzirwa ndeye kubva muchinjikwa kubereka kwemuremu wakakura mubereki ane imbwa diki .
Izvi zvinogona kureva kuti Frenchie yako inorasikirwa neyavo 'yakachena bred' chinzvimbo, asi inogona kunge iri sarudzo yakanakisa maererano nehutano hwavo.
Muchokwadi, kubereka-kuyambuka kwave kuchizivikanwa kubvisa matambudziko ehutano akapfuudzwa kubva kuvabereki vakachena (semuenzaniso yavo yakapfupiswa muzzle).
Izvo zvakakosha kuti uzive wako wekubereka uye nekutsvaga imwe yehumwe hunhu mune ino chiitiko.
Dwarfism shanduko izvo zvinogona kuitika mumagene ekugadzirwa kweiyo French Bulldog.
Izvi zvinoguma diki French Bulldog ine mashoma kukura uye kupfupiswa makumbo.
Vaberekesi dzimwe nguva vanoedza purofiti pahunhu husina kunaka nekutsvaga mamwe maFrenchies ane hurema hwakafanana uye nekuvaberekera mune tariro yekuti canine hushoma huchaitikawo mukati memarara.
Asi, kuva chirwere chetsandanyama, kudzikisira kunogona kutungamira mukurwadziwa kusingaperi mune mbwanana.
Ikoko unazvo; 10 zvinhu zvese imbwa anodikanwa anofanira kuziva nezve mini French Bulldog .
Rudzi rwakagadzirirwa kushamwaridzana, rudo uye runako; hazvina kuoma kudanana nerudzi urwu rudiki.
Kusindimara kudiki, kusimba uye kuda, asi izere nerudo, kuvimbika uye charisma, izvi zvinounza hunhu husina kumira uye hunhu hwakanyanya hunovaita shamwari yakanaka kune vese vanogara munyika nemaguta.
Chii chako kutora? Tiudze pazasi!
Breed Info 101: Chipoo rudzii rwembwa?
Kuzivisa iyo Shih Tzu: Iyo Inopenga Mudiki Shumba Imbwa
chii imbwa yemapuranga
mazita embwa akasimba murume german shepherd
hazvina ngozi here kupa imbwa mavise
cool german shepherd mazita echikadzi